निलो चाँद सुविधाहरू, रहस्य र किन यो हुन्छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
निलो चाँद es एउटा खगोलीय घटना जुन एकै महिनामा दुई पूर्ण चन्द्रमाहरूको अस्तित्व भनेर चिनिन्छ। यो किन हुन्छ, कहिले र कहिले प्राय जसो विज्ञानमा धेरै कुरा अध्ययन गरिन्छ। यस लेखमा हामी तपाईंलाई नीलो चाँद के हो र किन यसको स्थान लिन्छ, साथ साथै केही अन्य रहस्यहरू पनि बताउन जाँदैछौं।
तपाइँ निलो चाँद के हो भनेर जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ? पढिरहनुहोस् किनकि हामी तपाईंलाई सबै कुरा भन्छौं।
1 निलो चाँद के हो?
2 मार्च २०१ in मा चन्द्रमाहरु
3 यसको नाम के हो यदि यो निलो छैन भने
4 विभिन्न गोलार्धमा चन्द्रमाका चरणहरू
5 हामीसँग निलो चाँहि कति छ?
निलो चाँद के हो?
निलो चाँद वा निलो चाँद अ in्ग्रेजीमा, यो घटना हो जुन केहि बर्षमा भित्र हुन्छ प्रति महिना एक भन्दा बढी पूर्णिमा संग ती। यद्यपि यसलाई निलो भनिन्छ, यसको मतलब यो होइन कि यो दोस्रो पूर्णिमा जुन हामीले अवलोकन गरिरहेका छौं राम्रोसँग निलो छ। योसँग यसको केही सरोकार छैन। यो नाम हो जुन महिनाको दोस्रो पूर्णिमा भनिन्छ र जुन प्रायः प्रायः देखा पर्छ।
यस वर्ष २०१ During को बखत हामीसँग दुईवटा निलो चाँदहरू भए। यो एक घटना हो जुन विरलै شا हुन्छ। जनवरीको महिनामा हामीसँग मार्चमा उस्तै महिनामा दुई पूर्ण चन्द्रमाहरू थिए। यस महिनाको दोस्रो चन्द्रमा नै निलो चन्द्र मानिन्छ।
यो तथ्य यो तथ्यको कारणले हो कि पूर्ण चन्द्रमा हरेक २ .29,5 ..XNUMX दिनमा आउँछ। यो के हो जुन चंद्र महिना वा चन्द्र चक्र मानिन्छ, जसमा तपाईंको सबै भागहरू चरण। यदि पूर्णिमा महिनाको सुरूमा देखापर्दछ भने, यो अन्तमा एक सेकेन्ड हुनको लागि लामो लामो हुन सक्छ। यो हुनको लागि, हामीले चरणहरूको बायोडायनामिक नमुनाहरू र हाम्रो उपग्रहको चक्र अध्ययन गर्न जारी राख्नुपर्दछ।
मार्च २०१ in मा चन्द्रमाहरु
हामी विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं निलो चन्द्र मार्च २०१ 2018 को महीनामा किन भयो। फेब्रुअरीमा केवल २ 28 दिन मात्र भएको छ, बाँकी महिनाहरूमा यो एकदम छोटो छ। तसर्थ, यदि पूर्णिमा महिनाको सुरूमा देखा पर्छ, यसले पर्याप्त समय दिन्छ ताकि अन्तमा तपाईं अर्को देख्न सक्नुहुनेछ। पहिलो पूर्णिमा मार्च २ मा र दोस्रो मार्च 2१ मा भएको थियो। महिनाको अन्तिम दिन यो दोस्रो चन्द्रमालाई हामी निलो चाँद भन्छौं।
यस कारणले होईन, यसमा र blue निलो वा त्यस्तो केहि छ। जब यो घटना हुन्छ, बर्षको बाँकीमा १ mo पूर्ण चन्द्रमाहरू १२ को सट्टा पंजीकृत हुन्छन्। वर्षको withतुहरूसँग पनि त्यस्तै हुन्छ, जसमा उनीहरूमध्ये केही instead को सट्टा have हुन सक्छ।
यस मौसमी निलो चन्द्रमा मौसमी निलो चन्द्र भनिन्छ। कृषकहरूका लागि यस घटनाको अस्तित्व यति महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूले यो तिनीहरूको क्यालेन्डरमा नोट गरे। जब हामी जान्न चाहन्छौं कि हामी अर्को मौसमी निलो चन्द्रमा कहिले देख्छौं, यो मे १,, २०१ 18 मा हुनेछ।
यसको नाम के हो यदि यो निलो छैन भने
एक नाम जसले उपग्रहमा नरहेको र indicates्गलाई स indicates्केत गर्छ, त्यसले धोका वा त्रुटि निम्त्याउन सक्छ। यो समयसँगै अनुमान गरिएको छ कि त्यो नाम किन हो यदि यसको रंग नीलो छैन भने। यस नामको अस्तित्व वर्णन गर्न सक्ने सबैभन्दा व्यापक सिद्धान्त हो एउटाले यो मध्यकालीन अंग्रेजीबाट आएको हो भन्छ। यो फिर्ता फिर्ता छ यो कल थियो जहाँ Belewe, जसको अर्थ "धोका दिनु" हो। पछि उसलाई बोलाइयो नीलो, जसको अर्थ निलो हो। यो सम्भव छ कि यो नाम एक धोकेबाज चाँदबाट आएको हो जुन महिनाको अवधिमा देखा पर्ने छ जुन यो अनुरूप छैन र अघि बढ्नुहोस्।
यद्यपि यो सब भन्दा प्रख्यात सिद्धान्त हो, त्यहाँ केहि अरु पनि छन् जसले केहि भिन्नतालाई चिन्ह लगाउँदछन्। र यो यो हो कि उनी सोच्छन् कि त्यहाँ अवधारणा हुनु अघि कि दोस्रो चन्द्रमा खराब भाग्य हो र, त्यसैले, यो निलो र colorसँग सम्बन्धित थियो जुन उदासी प्रतिनिधित्व गर्दछ।
जेसुकै उत्पत्ति हो, तपाईलाई के थाहा छ त्यो साँच्चिकै हो, दोस्रो पूर्णिमा जुन तपाईको एकै महीनामा छ निलो र। छैन।
विभिन्न गोलार्धमा चन्द्रमाका चरणहरू
यो यस्तो हुन्छ कि कहिलेकाँही हामी निलो चाँद भेट्टाउन सक्छौं, तर यसले हामीले देखेका घटनालाई संकेत गर्दैन। केहि परिस्थितिहरुमा हामी नीलो रंगको साथ चन्द्रमा देख्न सक्छौं र यो एकदम दुर्लभ घटना हो।
के कारण यो रंग देखिन सक्छ वातावरणको माथिल्लो तहहरूमा धुलो वा खरानी धुवाँको उपस्थिति। यी कणहरूले रातो बत्ती बिस्तारै थोरै बनाउँदछन् र निलो प्रकाश बाहिर खडा हुन्छन्। जे होस्, चन्द्रमा त्यो रंग हुन पूर्ण हुनुपर्दैन। यस घटनासँग यस तथ्यसँग कुनै सरोकार छैन कि त्यहाँ एकै महिनामा दुई पूर्ण चन्द्रमाहरू छन्।
यो घटना केही ज्वालामुखी विस्फोटको कारण देखा पर्‍यो जुन ज्वालामुखी खरानीको ठूलो मात्रा वायुमण्डलबाट रातो बत्तीलाई यसलाई अधिक नीलो बनाउनको लागि फैलाउन जिम्मेवार थियो। यस बर्षमा, जबसम्म ठूलो ज्वालामुखी फुट्दैन, हामी नीलो चाँद देख्नेछैनौं। ठूलो ज fire्गलको आगोले हामीलाई हाम्रो उपग्रहमा यो सुन्दर रंग देख्न पनि सक्छ, धुवाँ र खरानीको ठूलो मात्रा दिएर।
हामीसँग निलो चाँहि कति छ?
यो त्यस्तो चीज हो जुन धेरैले जान्न चाहन्छन्। हरेक तीन बर्षमा तपाईले एउटै महिनामा दुई पूर्ण चन्द्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। गणना गरेर यो भन्न सजिलो छ २ .29,5।। दिनको सम्पूर्ण चंद्र चक्रको रूपमा। यदि तपाइँ महिना द्वारा महिना गणना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँले त्यो महिना पाउनुहुनेछ जुन दुई पूर्ण चंद्रमा होस्ट गर्न सक्दछ। यो दुर्लभ छ कि एकै वर्षमा त्यहाँ दुईवटा निलो चन्द्रमाहरू छन् किनकि यो वर्ष भएको छ।
यो घटना कसरी हुन्छ भनेर अझ राम्ररी बुझ्नको लागि, यो जान्न सजिलो छ कि कसरी चन्द्रमाको पात्रो साइटको सम्बन्धमा। हामीलाई थाहा छ, सौर्य पात्रो एक हो जुन हाम्रो ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि घुम्न लाग्ने समयको आधारमा कार्य गर्दछ। त्यो हो, एक बर्ष जुन १२ महिना र 12 365 दिनमा विभाजित हुन्छ। जबकि, चन्द्र चक्र २ .29,5 ..XNUMX दिनहरू पछिल्लो छ।
तसर्थ, metonic चक्र मिल्दो एक छ जबकि यसले पूर्ण रूपमा सौर चक्र संग समिकरण गर्न पात्रो लिन्छ। यो उनीहरूलाई दोहोर्याइन्छ र व्यवहार पूर्ण रूपमा मिल्दछ।
म आशा गर्छु कि यस जानकारीको साथ तपाईले नीलो चन्द्रमाको बारेमा बढि जान्नु हुनेछ
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » निलो चाँद